अदालतको गेटमा खुकुरी प्रहार, मुद्दाको अनुसन्धानमा चलखेल ? « Drishti News – Nepalese News Portal
अदालतको गेटमा खुकुरी प्रहार, मुद्दाको अनुसन्धानमा चलखेल ?
४ कार्तिक २०७८, बिहिबार 7:38 pm
काठमाडौैं । अदालतको गेटमै खुकुरी हानी हत्या प्रयास गरेको घटनाको अनुसन्धान तथा अभियोजनमा समेत चलखेल भएको छ । गत १० असोजमा उच्च अदालत विराटनगरको गेटमा काभ्रेका कलामसिंह लामामाथि खुकुरी प्रहार भएको घटनामा संलग्नमाथि जोगाउनसरकारी वकिल कार्यालयमा चलखेल भएको हो ।
उनका व्यवसायिक साझेदार मोहम्मद साजिक मियाँकै योजनामा उनीमाथि खुकुरी प्रहार भएको प्रहरीले जनाएको छ । मियाँ र खुकुरी प्रहारमा संलग्न विमल कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने घटनामा संलग्न अन्य दुई जना अझै फरार छन् । भक्तपुरका रमेश राजवहाक र मोरङका नेत्र कट्टेल अझै फरार छन् । उनीहरुलाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्न लागेको छ । चारजनाविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा चलाउन लागिएको छ ।
व्यवसायीक साझेदारीकै विषयमा विवाद हुँदा खुकुरी प्रहार भएको देखिएको मोरङका एसपी जनार्दन जिसीले बताए । ‘घटनामा संलग्न साझेदारसहित दुई जना पक्राउ परिसकेका छन्,’ एसपी जिसीले भने,‘दुई जना फरार छन्, उनीहरुको खोजी भइरहेको छ ।’
५० हजार रुपैयाँ दिएर लामाथि खुकुरी हान्न लगाएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको हो । योजनाकारमध्ये राजवहाक समेत भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनी काठमाडौंमा खुलेआम हिडेंपनि प्रहरीले पक्राउ गर्न चासो दिएको छैन ।
लामामाथि खुकुरी हान्ने विराटनगर महानगरपालिका–११ का २७ वर्षीय विमल कार्कीले प्रहरीसमक्ष आफूले ५० हजार रकम लिएर लामामाथि खुकुरी प्रहार गरेको वयान दिएका छन् । घटनामा जोडिएका मुख्य अभियुक्त भक्तपुर ठिमीका रमेश राजबाहक र मोरङका नेत्र कट्टेललाई पनि प्रहरीले फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन लागेपछि उनीहरुले अदालत र सरकारी वकिलको कार्यलयमा चलखेल गरेका छन्। राजबाहक र कट्टेलबिरुद्द कलामसिंह लामाले किटानी जाहेरी पनि दिएका छन्। उनीहरु दुबै जना प्रहरीको नजरमा फरार भएपनि बिराटनगरमा खुलमखुला हिँडिरहेका छन्। राजबाहकले कार्कीको बयान फेर्न लगाएर जोगिनका लागि सरकारी वकिलको कार्यालय र अदालतमा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप छ।
लामालाई इटा उद्योगमा ठूलो फाइदा हुने प्रलोभन देखाएर उनै राजबाहकले नै मोरङसम्म पुर्याई महम्मद साजिद मियाँसँग चिनजान गराएर लगानी गर्न बाध्य बनाएका थिए । दुई वर्ष अघि लामाले जब उक्त उद्योगमा करोडौं रकम लगानी गरे त्यसपछि राजबाहकले लामासामु दैनिक १० हजार इटा निशुल्क दिनुपर्ने जस्ता अस्वभाबिक सर्तहरु राखेर दुःख दिएका थिए ।
योजनाबद्ध रुपमा लामाका साझेदार मियाँले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा उजुरी दिए । उक्त इटा उद्योगमा मियाँ र उनकी श्रीमतीको ५०–५० प्रतिशत शेयर थियो । मियाँले श्रीमतीको नाममा रहेको ५० प्रतिशत शेयर लामालाई बेचेका थिए भने बाँकी ५० प्रतिशत शेयर वार्षिक ५० हजार इटा पाउने शर्तमा ५ वर्षका लागि लिजमा दिएका थिए ।